Dal Somalia oo bur burkeeda ka shaqayn jiray oo sagxada tagay & Dhaqaalihiisii oo walaac la muujinayo – WIDHWIDH ONLINE
Dal Somalia oo bur burkeeda ka shaqayn jiray oo sagxada tagay & Dhaqaalihiisii oo walaac la muujinayo
Published: January 5, 20196:09 am
Suuqa saamiyada Dubai ayaa maalinkii ugu dambaysay ee sanadii 2018 xirmay, iyada oo uu luumiyey 25% qiimahiisa taas oo ka dhigan sanadkii ugu xumaa ee suuqaasi tan iyo xasaradihii dhaqaale ee dunida ka dhacay toban sano ka hor.
Dalxiiska iyo iyo iibka guryaha ayaa si gaar aad u liitay sanadkii 2018.
Hoos u dhaca suuqa dhaqaalaha Dubai ayaa kamid ahaa kuwii ugu xumaa ee gaara dalalka Khaliijka iyo Carabta, iyada oo ay jiraan astaamo muujinaya in dhaqaalaha ilaha badan ee uu tiirsanaa Imaaraadku hoos u dhacayo.
“Wax soo saarka mashiinada dhaqaajiya dhaqaalaha Imaaraadka ee ah hantida ma guurtada iyo ganacsiga ayaa ahaa kuwa liita” waxaa sidaas yiri M.R. Raghu oo ah madaxa xarunta cilmi baarista maaliyadda Kuwait ee Markaz.
Hase yeeshee xaaladda uma xumeyn sida sanadii 2008 markaas oo suuqa saamiyada Dubai uu gaaray khasaare dhan 72% kadib markii xasaradihii dhaqaale ee dunida ay dhibaatooyin daymo la xiriira ku kiciyeen Imaaraadka.
Suuqa saamiyada Qatar ayaa aad uga wanaagsanaa Imaaraadka, waxaana uu dalalka Carabta ku hogaaminaysay dhammaadkii sanadkii tagay faa’iido 21% ah, inkasta oo muddo 18 bilood ah dalkaas uu ku jiro go’doon ay saareen dalalka dariska la ah ee uu hogaamiyo Sacuudiga.
Dhaqaalaha suuqa Abu Dhabi ayaa isna koror 10% ku dhamaystay sanadkii 2018.
Suuqa saamiyada ugu weyn dunida Carabta ee Sacuudiga ayaa sanadka ku dhamaystay faa’iido 8.3% ah, inkasta oo bishii October uu asiibay hoos u dhacii ugu xumaa oo muddo saddex sano ah kadib markii weriye Jamaal Khaashuqji lagu dhex dilay Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
“2018 waxa uu suuqa saamiyada Sacuudiga u ahaa sanad aan xasiloonayn, wuxuu ku bilowday si xooggan hase yeeshee hubanti la’aan siyaasadeed ayaa sababtay inuu dhibco badan lumiyo” ayuu Raghu u sheegay AFP.
Sababaha ugu weyn ee khasaaraha suuqa saamiyada Dubai ayaa ah ayada oo uu hoos u dhacay iibka hantida ma guurtada ah oo ay ugu wacan tahay dalabka oo hoos u dhacay iyo guryo ka badan kuwii loo baahnaa oo la dhisay.
iibka guryaha oo ah 13% dhaqaalaha Dubai ayaa hoos u dhacayey tan iyo sanadii 2014 hase yeeshee wuxuu xoogaystay 2018-kii.
Rubacii Saddexaad ee sanadkii 2018 oo kaliya ayaa qiimaha guryaha ee Dubai waxay hoos u dhaceen 7.4% sida uu sheegay Bankiga dhexe ee Dubai.
Saamiyada shirkadda Emaar oo ah tan ugu weyn ee dhismaha ee Bariga dhexe ayaa lumisay ku dhowaad bar qiimaheeda.
Dhaqaalaha guud ee Dubai oo aan ku xirneyn iibka saalida ayaa la filayaa in sanadkii 2018 uu kordhay kaliya 2.3% taasi oo ka yar 2.8% sanadkii 2017
Mucaaradka DF oo Ka Dhexda u Galay Gudoomiyaha Baarlamaanka & Soo Dhawayn Xoogan u Sameeyay (DAAWO VIDEO)
Published: December 1, 20186:12 pm
Maxaad Kala Socotaa ababta ka danbeysa in Aqalka Sare uu xiriirka u jaro Golaha shacabka (DHAGAYSO)
Published: January 4, 20197:53 am